Dowladda Somaliya oo Siyaasiyiinta mucaaradka ugu baaqday inay... | Universal Somali TV
Dowladda Somaliya oo Siyaasiyiinta mucaaradka ugu baaqday inaysan ku fogaanin mucaaradnimo
Kadib markii xubnaha mucaaradka dowladda Federalka Somaliya ay ku shireen Magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay soo saareen qodobo kala duwan oo dowladda ay ku dhaleeceeyeen, ayaa Dowaldda Federalka Somaliya waxa ay jawaab ka bixisay arrintaasi.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Somaliya Daahir Maxamuud Geelle, ayaa Siyaasiyiinta Nairobi ku shiray ugu baaqay inaysan ku fogaanin mucaaradnimada.
Waxa uu sheegay Daahir Geelle dowladda Somaliya inay wado dadaalo ku aadan dib isugu keenista Somaliya, dadaalkasina aanan loo baahneyn in la curyaamiyo.
Ugu dambeyn Wasiirka Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in siyaasiyiinta hanka hoggaamineed leh in ay dowladda soo hor fariistaan, islamarkana ay ka wada hadlaan Soomaali ahaan masaalixda Ummadda Soomaaliyeed wax walbana dhameeyaan.
“Siyaasiyiinta waa saamiley wa adad waxaan heyna wax ku leh oo nala leh oo yeelan jiray oo yeelan kara berri in maamulka nagu xumaado ma ahan, dowladda waxay wadaa hannaan isku raadin ah meesha aad noo maleysaan ma jirno in la isu yimaada rabnaa, baabuurka yaan xawaaraha laga badin”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta oo xalay ka hadlayay Munaasabad ka dhacday Muqdisho.
Siyaasiyiinta, Xildhibaannada iyo qaar ka mid ah Xisbiyada mucaaradka ee ku shiray Nairobi ayaa qodobadii ay oo saareen waxaa ka mid ahaa inay qabsan doonaan shirweyne ay ku doonayaan inay ku soo dhisaan xukuumad Cusub ,iyaga oo ku eedeeyey Xukuumadda Soomaaliya inay fashilantay, waxaana badi ay ahaayeen kuwo xilal kasoo qabtay dowladihii hore ee dalka soo maray.
Kan-xigaAskari ka tirsan Ciidamadda Puntland ...
Kan-horeMadaxweyne Farmaajo oo ka qayb galaya...
Xasan Ruuxaani oo amaanay midnimada dowlada iyo shacabka Iiraan
47,338,215 unique visits